မေ... | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ကဗျာ » မေ...
လွင့်နေတဲ့ နှင်းပွင့်ကလေးတွေက ငါ့အိပ်မက်တွေဆိုရင်
သက်ဆိုင်သူ မကြားနိုင်လို့ ရင်ထဲမှာပဲသိမ်းထားတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်...။
ဘယ်မှာပဲနေနေ ၊ ဘယ်ကို ပဲရောက်ရောက်...
ဟိုးဝေးဝေးက “ မေ ”တစ်ယောက် သိနိုင်ပါ့မလား....။
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 8:27 AM
Posted by မိုးသက် at 8:27 AM Read more
mstint March 7, 2012 at 9:05 AM
ပစ်ပစ် March 7, 2012 at 9:24 AM
မြတ်ကြည် March 7, 2012 at 4:13 PM
အော်ရင်အော်လိုက်ပါ။ ရှက်နေတာမဟုတ်လား? နောက်တာ။ အောင်မြင့်သူကိုသိလား?
လက်ဝဲ March 7, 2012 at 7:23 PM
ချစ်သူ တမ်းချင်း ကဗျာ မှန်ရင်
မေမြို့မိုး March 8, 2012 at 1:51 AM
သိတယ် အစ်မမြတ်ကြည်... တစ်မေဂျာတည်းလေ..
ချစ်စံအိမ် March 8, 2012 at 1:28 PM
ဖြိုးဇာနည် March 9, 2012 at 1:47 AM
အလွမ်းခရီးသည် March 10, 2012 at 9:23 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 11, 2012 at 9:21 AM
မကြာခင်မှာ မော်စကိုမြို့မှာ နေရောင်နွေးနွေးတွေ လွှမ်းခြုံတော့မယ် မဟုတ်လား။။
အဲဒီခါကျ တစ်မြို့လုံးကြားအောင် ထပ်အော်ကြည့်ပေါ့။
သူမလေး ကြားပါလိမ့်မယ်း)
ရင်ဆူး March 13, 2012 at 11:41 AM
ကိုရဲ March 16, 2012 at 12:12 AM